7/24/2014 09:16:00 AM beauty
မျက်နှာ အသားအရေဟာ လူတစ်ယောက် အတွက် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မည်သူမဆို မျက်နှာကို အလေးထား သင့်ပါတယ်။ ဆေးကြော တာက မိမိဘာသာ အိမ်မှာ မျက်နှာသစ်တာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်နှာ အကြော များကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်း မျက်ရိုးများကို နှိပ်နှယ်ပေးခြင်း မျက်နှာ ပေါင်တင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ အဆင်ပြေမယ့် ဆိုင် (သို့) အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
ခဏခဏ မျက်နှာကို ဆေးကြောဖို့ မသင့်ပါဘူး။ မျက်နှာ အသား
အရေဟာ ပါးလွှာတဲ့ အတွက် ခဏခဏ ဆေးကြောပါက အသားအရေကို ပျက်စီးနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်လ တစ်ကြိမ်လောက် ဆေးကြော ပေးခြင်းဖြင့် လုံလောက် ပါတယ်။
ဒီလို ဆေးကြော သန့်စင်ပေး လိုက်သည့် အတွက်ကြောင့် စိတ်ပေါ့ပါး လွတ်လပ်စေရုံသာမကဘဲ မိမိကိုယ်ကိုယ် ရုံကြည်မူပါ ရရှိစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာနှင့် မျက်ရိုး တစ်ဝိုက်ကို နှိပ်နှယ် ပေးလိုက်ခြင်း ကလည်း ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းပိုင်း အကြောတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ သင့်ကျန်းမာရေးကို ထောက်အကူ ပြုစေမှာဖြစ် ပါတယ်။
လှပချင်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေး လိုက်စားသူပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေး သင့်ပါတယ်။
လှပပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ရပါတယ်။
Ref - healthandbeauty
ကျော်လင်းနိုင် (ရိုးရာလေး) အပြည့်အစုံသို့ »
7/22/2014 08:06:00 AM beauty
7/21/2014 08:29:00 PM beauty
*promise.pauk* အပြည့်အစုံသို့ »
7/17/2014 10:04:00 AM beauty
7/15/2014 01:14:00 PM beauty
7/08/2014 12:28:00 PM beauty
ကျား ဖြစ်ဖြစ် မ ဖြစ်ဖြစ် အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး နုပျိုစေမဲ့ နည်းလမ်း ၃ သွယ်
7/05/2014 03:38:00 PM beauty
အသားအရေ နုပျိုတင်း ရင်းစေဖို့အ တွက် မျိုးဗီဇကလည်း အရေးပါတဲ့ အချက်ဖြစ် ပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ နောက် တစ်ချက်ကတော့ ဘဝနေထိုင် စားသောက် မှုပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြောင်း ကင်းဝေးဖို့ လျှို့ဝှက် ချက်တစ်ခုက နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို တိုက်ရိုက်မထိတွေ့အောင် ရှောင်ရှားဖို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာ နေရောင်ကာခရင်မ်ကို အမြဲလိမ်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တိမ်ထူတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ တောင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင် ခြည်ဟာ အရေပြားထဲကို ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်နိုင်ပြီး အရေပြားကို ထိခိုက်စေ နိုင်တာကြောင့် အရေးကြောင်းပါးပါးထင် တာနဲ့ ပါးရေတွန့်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ နေရောင်ကာခရင်မ်ကို လိမ်းတဲ့ အခါမှာ မျက်နှာကိုသာမက လည်ပင်းကို ပါ လိမ်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အရွယ်တင်နုပျိုဖို့အတွက် ဒုတိယ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ စီးကရက်နဲ့ အ ရက်ကို ရှောင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင် ခြည်ဒဏ်ခံရတာက အသားအရေအ တွက် အဓိက ရန်သူဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ် သောက်တာက အရေးကြောင်းဖြစ်စေ တဲ့ ဒုတိယအကြောင်းရင်းပါ။ ဆေးလိပ် သောက်တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာ ရင် နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ အရေးကြောင်း ထင်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ အကြောင်းက တော့ စီးကရက်မီးခိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေပြားအသစ်ပြန်ဖြစ်တဲ့ သဘာဝဖြစ် စဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလို့ပါ။ ဆဲလ်ဟောင်းတွေ ပျက်ပြီး ဆဲလ်သစ် တွေအစားထိုးတဲ့ ဖြစ်စဉ်လျော့နည်းတာ ကြောင့် အရေပြားထိခိုက်ပျက်စီးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောကလည်း အရေ ပြားရဲ့ အစိုဓာတ်တွေကို ယုတ်လျော့သွား စေပြီး ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ကာ နုပျိုတဲ့ တောက်ပမှုကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ဟာ အရေပြားဆဲလ်တွေကို တင်းရင်းစေပြီး ကျန်းမာလှပစေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဝိုင်တစ်ဖန်ခွက် သောက်တာ က အသားအရေကို မထိခိုက်စေပေမယ့် ပုံမှန်အလွန်အမင်း သောက်နေရင် ထိ ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်မှ၊ အရက်သောက် မှ အပန်းပြေတယ်လို့ ခံစားရရင် လေ့ ကျင့်ခန်းလုပ်တာကို အစားထိုး ဆောင် ရွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်အသားအရေ က ပိုမိုကြည့်ကောင်းလာတာကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ လေ့ ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် သွေးလှည့်ပတ် မှုကို ကောင်းစေပြီး အသားအရေကို ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။
အသားအရေ နုပျိုတင်းရင်းစေဖို့ တတိယလျှို့ဝှက်ချက်က သင့်ပန်းကန် ပြားပါ။ သင်စားတဲ့အစာထဲမှာ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့် များများပါတဲ့ အစာတွေ ပါဝင်နေရင် အသားအရေက ပိုမိုလှပ ကြည့်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ အဖြူ ရောင်သကြားတွေကို လျှော့စားပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေ၊ အစိမ်းရောင် နဲ့ အနီရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးပါ။ လက်ဖက်စိမ်းလက် ဖက်ရည် ဒါမှမဟုတ် ရေကို များများ သောက်ပါ။ ဒီလို စားသောက်တာက အ ရေပြားကို အိုမင်းစေတဲ့ ဖရီးရယ်ဒီကယ် တွေကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်တာကြောင့် အ သားအရေမှာ အရေးကြောင်းကင်းပြီး နု ပျိုတင်းရင်းလှပစေပါတယ်။
6/29/2014 11:43:00 AM beauty
PyiChitThar အပြည့်အစုံသို့ »
6/16/2014 08:44:00 PM beauty
Credit : Dr. တင့်ဆွေ အပြည့်အစုံသို့ »
Daily Health အပြည့်အစုံသို့ »
6/11/2014 01:12:00 PM beauty
ကိုယ့်အသားအရေ၊ ဆံပင်နဲ့ လက်သည်းတွေအတွက် တစ်လတစ်ခါ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်လနှစ်ခါလောက် ပိုက်ဆံအကုန်အကျခံပြီး beauty saloon တွေ သွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ အလှအပရေးရာ တစ်ချို့အတွက် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ အဖျားနှစ်ခွဖြစ်တာတွေ၊ ဆံသားခြောက်သွေ့တာတွေ ကာကွယ်နိုင်အောင် ခေါင်းမလျှော်ခင် အုန်းဆီကို သေသေချာချာ လိမ်ေးပးပါ။ ဒါဟာ ဆံပင်ပေါင်းတင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဆံပင်သားကျန်းမာစေပါတယ်။
၂။ဆံပင်လိပ်တဲ့ အပူချောင်းနဲ့ ထိမိလို့ အသားလောင်သွားတယ်၊ ပူပြီးနာသွားတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းပဲ ဒိန်ချိန်နည်းနည်းသုတ်လိမ်းပြီး ၁၀မိနစ်လောက် နေလိုက်ပါ။ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
၃။ပန်းသီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရှာလကာရည်ကို တိုနာအဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေဖို့ မျက်နှာရဲ့ T zone ကို သုတ်လိမ်းပေးရမှာပါ။
၄။အသားအရေ ချောမွေ့ကြည်လင်စေဖို့ သံလွင်ဆီနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။မျက်လုံးအောက်မှာ မို့နေတာတွေ၊ ဖောင်းနေတာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ လက်ဖက်ရည်ထုပ် အေးအေးလေးတွေနဲ့ ၅မိနစ်၊ ၆မိနစ်လောက် ကပ်ထားလိုက်ပါ။
၆။မျက်လုံးလိုင်နာ cat-eye ဆွဲဖို့ဆိုရင်တော့ တိပ်လေးကို ညှပ်၊ ကပ်ပြီး ခုလိုဆွဲလို့ရတယ်နော်။
၇။ကော်ဖီတွေ၊ ၀ါတွေကြောင့် ၀ါထိန်နေတဲ့သွားတွေ ဖြူဖွေးစေအောင်ဆိုရင်တော့ သွားတိုက်တံမှာ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနည်းနည်းဖြူးပြီး သွားတိုက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုအိုကေသွားပါလိမ့်မယ်။
6/10/2014 06:50:00 PM beauty
6/07/2014 11:25:00 AM beauty
ဆားဝက်ခြံဟာ ၀က်ခြံအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်တယ်.နဖူး၊နှာခေါင်းနဲ့ မေးစေ့ တစ်ဝိုက်မှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်တယ်. မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အဆီထုတ်တဲ့ gland တွေက အဆီတွေကို ပုံမှန်ထက်ပိုထုတ်တဲ့အခါ အရေပြားအောက်မှာ သွားပြီးစုကြတယ်.အဲဒီအဆီစုလေးတွေက ပြင်ပကလေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ မဲသွားကြတယ်.(ဒါကြောင့် ဆားဝက်ခြံဆိုမညှစ်နဲ့လို့ပြောကြတယ်)
- သစ်ခြပိုးခေါက်အမှုန့်တစ်ဇွန်းနှင့် ရှောက်ရည်တစ်ဇွန်းကို သမအောင်မွှေပါ။
မျက်နှာပေါ်တွင် ၁၅-၂၀မိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေဖြင့်ဆေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၂-၃ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါ။
- ရှောက်ရည်တစ်ဇွန်း နှင့် မြေပဲဆီတစ်ဇွန်းကို သမအောင်မွှေပါ။
ဆားဝက်ခြံနေရာတွင် ၁၅-၂၀မိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေဖြင့်ဆေးပါ။
- လတ်ဆက်သောနံနံပင်အား လက်တစ်ဆုပ်ဆာယူပြီး အရည်ထွက်တဲ့ထိခြေပေးပါ။ နနွင်းအနည်းငယ်ရောပြီးသမအောင်မွှေပါ။ ပြီးလျှင်မျက်နှာအားသေချာစွာဆေးကြောပါ။ သက်သာသည်ထိ ညအိပ်ရာမ၀င်ခင်တိုင်းပြုလုပ်ပေးပါ။
(ဆားဝက်ခြံများထွက်တတ်သော အမျိုးသမီးများသည် oil (အဆီ)များကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားသော အလှကုန်များရှောက်ကြဉ်ရမည်။)
Credit to အလှအပရေးရာ အပြည့်အစုံသို့ »
6/07/2014 11:20:00 AM beauty
photo>> superfineusa.com အပြည့်အစုံသို့ »
6/05/2014 09:26:00 AM beauty
Ref : ကျော်တင့်ဆွေ ၊ ရောဂါကုသနည်း တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ အပြည့်အစုံသို့ »
6/03/2014 11:07:00 AM beauty
5/27/2014 05:09:00 PM beauty
by Wutyee Food House အပြည့်အစုံသို့ »